चीनले बनायो मोबाइल जस्तै चार्ज हुने विमान (फोटो फिचर)
काठमाडौं, असार ५ चीनका एवियशन एकादमीले मोबाइल जस्तै चार्ज हुने विमान बनाएका छन् । २ सय ३० किलो रहेको सो विमानको १ सय ४५ मिटर लामो पंखा छ । ३
२० प्रतिशतले घट्यो ग्यालेक्सी ग्रयाण्ड म्याक्सको मूल्य
नयाँ दिल्ली, असार ५ भारतमा सामसुङले आफ्नो स्मार्टफोन ग्यालेक्सी ग्रयाण्ड म्याक्सको मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ। ग्यालेक्सि ग्रयाण्ड म्याक्स यही वर्ष फब्रुअरीमा १५ हजार ९ सय ९० भारतीय रुपैयाँमा
खुसीको खबर : भूकम्प आउनु २२ सेकेन्ड अघि नै जानकारी पाइने !
नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले भूकम्प आउनुभन्दा १० देखि २२ सेकण्डअघि नै जानकारी दिने प्रविधि जडान गरेको छ । चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा ल्याइएको यो प्रविधिलाई सबै नागरिकसम्म
स्काइपले निःशुल्क फोन गर्न सकिने सुविधा हटायो
काठमाडौं असार १ स्काइपले निःशुल्क फोन गर्न सकिने सुविधा हटाएको छ। वैशाख १५ गतेदेखि उसले नेपाल टेलिकम र एनसेलको मोबाइलमा निःशूल्क फोन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। स्काइपबाट विदेशमा पनि
पछिल्लो समयमा समाजिक संजाल फेसबुकमा अश्लिल सामाग्री तथा लिंक ट्याग हुन थालेको भन्दै प्रहरीले त्यसबाट बच्ने उपाय सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सुझाव यस्तो छ। आफ्नो फेसबुक एकाउण्टबाट आफ्नो
टेलिकमको रिचार्ज गर्ने यस्तो छ नयाँ तरिका
नेपाल टेलिकमले रिचार्ज गर्ने नयाँ तरिका ल्याएको छ। पछिल्लो समय निकालेको रिचार्ज कार्डबाट उसले नयाँ तरिका ल्याएको हो। * ४१२* पिन नम्बर # गरेर प्रिपेड मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिने टेलिकमले
तपाई छोरा कि छोरी जन्माउने ? यस्तो छ तरिका
अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दिमा पनि छोरा र छोरीमाथिको भेदभाव विद्यमान रहेको छ । छोरा भए एउटा सन्तान भए पुग्छ भन्नेहरु छोरी जन्मेमा वंश धान्ने छोरा त चाहिन्छ नै भन्न पछि पर्दैनन्
९ सय पर्ने कम्प्युटर !
एउटा कम्प्युटरको मूल्य कति पर्छ ? साधारणतया हामीले १५ हजारभन्दा माथिका कम्प्युटरहरु किन्दै आएका छौं । तर अब छिट्टै ९ सय रुपियाँमै कम्प्युटर उपलब्ध हुने भएको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा